Givenchy ရဲ့ အလန်းစား Makeup Remover! | CosmeticMyanmar
Home » Article » Givenchy ရဲ့ အလန်းစား Makeup Remover!
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်။ ဒီနေ့မှာတော့ French Luxury Products တွေ နှစ်သက်ခုံမင်တဲ့ Beauties တွေအကြိုက်တွေ့စေမယ့် Givenchy ရဲ့ Makeup Remover လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ဒီ Makeup Remover ရဲ့ အားသာချက်ကတော့ ဘယ်လို မိတ်ကပ်အမျိုးအစားကိုမဆို အသားအရေအတွင်းပိုင်းဆုံးအထိ သန့်စင်ပေးပြီး တပြိုက်နက်တည်းမှာပင် အသားအရေကို ပြန်လည်နိုးကြားလာစေပါတယ်။ Ink-Black Gel ဟာ အနံ့အားဖြင့် စွဲဆောင်နိုင်လွန်းနိုင်ရုံ သာမကပဲ အသားအရေပေါ်တင်တဲ့အခါမှာ Oily Texture ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ရေနဲ့ ရောနှောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကတ္တီပါသားကဲ့သို့ နူးညံ့တဲ့ အထိအတွေ့မျိုးကို ပေးမှာဖြစ်ပြီး အညစ်အကြေးတွေကိုပါတပါတည်း သန့်စင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကအားဖြင့် ရေညှိလေးတွေကို အခြေခံဖော်စပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် နုပျိုမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာ အမှန်ပါပဲ။ အသားအရေ ပြန်လည်နိုးကြားရှင်သန်လာစေဖို့ရန်အတွက် Le Soin Noir ဆိုတဲ့ Formula ကို အခြေခံဖော်စပ်ထားပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ရှိ မိတ်ကပ်အညစ်အကြေးများသာမက ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အညစ်အကြေးများကိုလည်း ဖယ်ရှားသန့်စင်ပေးပါတယ်။ ဒီတော့အသုံးပြုပြီးနောက်မှာ သန့်စင်ပြီး လန်းဆန်းတဲ့ ခံစားချက်ကို ရရှိမှာဖြစ်တဲ့အပြင် အသားအရေဟာ တဖြည်းဖြည်းကျန်းမာပြီး နူးညံ့ချောမွေ့လာတာကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်းအားဖြင့် 92,50 ယူရိုကျသင့်ပြီး 175 ml ပါဝင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက Myanmar Online Branded Collection တို့မှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
Image Source : www.givenchybeauty.com